Igbo Mass Readings for December 7 2021 | Catholic Lectionary
Igbo Mass Readings for December 7 2021
December 6, 2021 by lectionary
TUEZDE IZUỤKA NKE ABỤỌ N’ OGE OLILE ANYA ONYE NZỌPỤTA
Chineke ji ike niile, nyere anyị aka ịdị na-enwe olileanya maka ebube nke ọmụmụ Kristi onye nzọpụta anyị. Eji ọñụ na-ekwusa ọbịbịa Ya n’akụkụ ụwa niile, n’ihina Ọ diị ndụ, soro Gị na-achị eze n’ịdịkọ n’otu nke Mmụọ Nsọ, site n’ụwatụwa niile. Amen.
Ihe Ọgụgụ nke mbụ – 40:1-11
Ihe ọgụgụ ewetara n’akwụkwọ onye amụma Aịzaya:
Osebụrụwa kwuru sị: kasie ndị nke m obi, kasienụ ha obi. Were nwayọọ gwa Jerusalem okwu, gwa ya na ụbọchị ịgba ohu ya agwụla, na a gbagharala mmehie ya niile, na Chineke ga-enye mbaghara ga-adị mmaji abụọ karịa mmehie niile o mere.
Otu olu na eti mkpu na-asị, “Dozierenụ Yahweh ụzọ n’ịkpa, meenụ ka okporo ụzọ ya dịkwa larịị n’ime ọzara maka Chineke anyị. Kpojuonụ ndagwurugwu nile, kposakwaanụ ugwu niile, meenụ ka ebe niile gbagọrọ agbagọ kwụrụ ọtọ, meekwanụ ka ebe niile dị ndakoro ndakoro dịrị larịị. Ebube nke Chineke ga-achawapụta. Mmadụ niile ga-ahụ ya n’ihi na Osebụrụwa ekwuola ya. “Otu olu na ekwu sị, “Tie mkpu.” M wee sị; “Gịnị ka m ga-eti?” “Mmadụ dị ka ahịhịa, mma ya dịka ifuru osisi dị n’ime ọhịa. Ahịhịa na akpọnwụ, ifuru osisi na-achanwụ, mgbe Yahweh kusara ha ume. N’ezie mmadụ dịka ahịhịa. Ahịhịa na-akpọnwụ, ifuru osisi na-achanwụkwa, ma okwu nke Chineke anyị na-adịgide ruo mgbe ebighi ebi.” Rigoro n’elu ugwu, gị bụ Zayọn onye na ezisa oziọma, welie olu gị elu tisie mkpu ike, o Jerusalem onye na-ezisa oziọma, tisie mkpu ike atụla egwu, gwa obodo niile nke Juda sị:”Lee Chineke ụnụ!” Lee, Osebụrụwa Chineke anyị ji ike abịa, ọ ga-eji aka ya na-achị. Ọ ga enye onye ọbụla ihe ruuru ya. Ọ ga-azụ igwe atụrụ ya dịka onye ncheatụrụ.
Ọ ga-eji aka ya achị ụmụatụrụ. Ọ ga-ebu ha n’ubu ya. Ọ ga-eji nwayọọ duo ndị na enye ụmụ ara.
ABỤỌMA NA AZỊZA – Ps: 96:1-2,3,10,11-12,13.
Azịza: Osebụrụwa Chineke anyi ji ike abia.
Kweerenụ Onyenweanyị ukwe ọhụrụ;
ụwa niile kweere Onyenweanyị ukwe.
Kweerenụ Onyenweanyị ukwe, too aha ya;
Kwupụta nzọpụta ya ụbọchị niile. Azịza
Mee ka ụwa niile mara maka otito ya;
Kwupụtakwa ọrụ ịtụnaanya ya n’ebe ndị mmadụ nọ.
Kwusachaanụ n’ụwa niile na Onyenweanyị bụ eze.
Ọ ga-eji ikpe nkwụmọtọ kpee mba niile ikpe. Azịza
Eligwe ñụrịba, ụwa goribe,
oke osimiri na ihe niile dị n’ime ya, tienụ mkpu.
Ala-ubi niile na ihe niile dị n’ime ya ñụrịbanụ,
ka osisi niile dị n’oke ọhịa kwebe ukwe añụrị. Azịza
N’Ihu nke Onyenweanyị n’ihi ọ na-abịa,
ọ na-abịa ikpe ụwa ikpe,
were kpee ụwa na ndị mmadụ ikpe. Azịza
Ụbọchị nke Onyenweanyị adịla nso, ọ na abịa ịzọpụta anyị.
OZIỌMA – 18:12-14
Ihe ọgụgụ ewetara n’oziọma dị nsọ nke Matiu dere.
Jesu gwara ndị na-eso ụzọ ya sị: “Gịnị ka ụnụ chere? Ọ bụrụ na otu onye nwere otu narị atụrụ, ma otu n’ime ha agahie ụzọ, ọ bụ na ọ gaghị ahapụ iri itoolu na itoolu ndị ọzọ n’elu ugwu, gaa ịchọ nke ahụ gahiere ụzọ. Ọ bụrụ na o nwere ka o si chọta ya, n’ezie agwa m ụnụ, ọ ga-añụrị ọñụ n’ihi ya karịa otu o ga-esi ñụrịa n’ihi iri itoolu na itoolu ndị ọzọ ahụ na-agahịeghị ụzọ. Ya mere, ọbụghị uche Nna m nke bi n’eligwe ka otu n’ime ụmụaka ndị a laa n’iyi.
Nna, Ị na-enye anyị nri nke si n’eluigwe. Site n’iketa oke n’ihe omimi nke a, kụziere anyị iji amamihe na-eso ihe nke ụwa a, ma hụkwa ihe nke eluigwe n’anya. Mezuoro anyị ihe ndị a site na Kristi Dinwenụ anyị. Amen.
Igbo Mass Readings for December 6 2021